Dhiig Karka Iyo Dawada Sinjibiisha – WARSOOR
Sinijibisha ayaa la cadeeyay inay dawo aad u wanaagsan tahay, waxaana la sheegay inay ku badana tahay maadada Gengirol oo ah tan ka qayb qaadata habsami u socodka dhiiga iyo inuu noqdo mid si fiican u dhex mara xidida. Waxaana ay warbixntu intaasi ku dartay inay Sinjibiishu kor u qaado saafinimada dhiiga iyo marinada dhiigu maro oo ay ka ilaaliso inay awdmaan.
Sinjibiishu waxay kaloo u dawo u tahay Dadka ku dawakha Safarada, Xanuunka ku dhaca Ciridka, Nabarada, kabuubyada Xubnaha jidhka laga dareemo. Noocyo tiro bdan oo Bakteria ah waa dawada ugu wanaagsan.
Sinjibiishu waxay dejisaa Maskaxda, cadaadiska Dhiiga oo ay hoos u dhigto, Apiete-ka oo ay Qofka u furto, fududaynta Dheefshiidka, ka hortaga Mataga iyo xanuunada yalaalugada, Xabka oo ay ka soo goyso dadka qufacaya iyo weliba iyadoo wax weyn u tarta Dadka aan ceshan Karin kaadida.
Siyaasi Jaamac Hilaac Oo Soo Dhaweeyay Qodobadii Heshiiska Dar-Dargelinta Doorashooyinka